Italia Casino Online - Casino Bonus Codes
Online cha cha Daashi Codes > Ịntanetị Ịntanetị Ịntanetị
Ndị Ịtali na-eme ihe ike bụ ndị a ma ama n'ihi ịhụnanya ha nwere banyere ịgba chaa chaa na ihe ize ndụ, Otú ọ dị, Gọọmenti Ịtali nwere ogologo oge iji nye iwu ụfọdụ ịgba chaa chaa. Ihe mere eji eme ihe a bu na na 90 ka otutu ndi mmadu nabatara udiri nturite a. Ikekwe nke a bụ n'ihi ịgba chaa chaa, ọtụtụ ndị na Mafia. Mana ka oge na-aga, ihe agbanweela na n'ime afọ ndị na-adịbeghị anya, mba ahụ ahụwo ngwa ngwa na ịgba chaa chaa.
Rịba ama maka ndị ọbịa na ndekọ ịgba chaa chaa anyị na-egosi na ụdị ịgba chaa chaa dị ugbu a Italy bu iji gbochie ego ndi mmadu na-egwu ndi Italy n'èzí. Ka ha wee nwee ike "ịghachite" ndị obodo, ndị na-ahapụ ịkwaga ná mba ọzọ, mba nile nke casinos dị nso n'ókè nke ala ndị agbata obi.
Na 2007, Italy nyere ikikere kaadị egwuregwu na-adabere na nkà na nkà, ikike kachasị ọhụrụ na ụdị ịgba chaa chaa iwu kwadoro. Otu onye isi na-achịkwa ịgba chaa chaa na Italy bụ AAMS (Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato), nke na-ahụ maka nlekọta na ịnye ikikere. Ugwo maka imebi iwu nwere ike dị iche - site na ikpe na mkpọrọ.
Ndepụta nke saịtị 10 Italian Online Casino
Ịgba chaa chaa n'Ịntanet n'Ịtali
Ịgba chaa chaa n'Ịntanet na-akwado. Dịka nnyocha dị iche iche, ịgba chaa chaa n'Ịntanet bụ otu n'ime ụdị ntụrụndụ ndị kasị ewu ewu na Ịtali. Ọ bụghị ihe mgbagwoju anya, ego ndị si n'ịgba chaa chaa n'ịntanetị na-eto eto kwa afọ. Ruo ugbu a, ndị Ịtali na-emeghe ohere maka saịtị ịgba chaa chaa n'ịntanetị na Itali na saịtị ịgba chaa chaa ndị ọzọ. Otú ọ dị, ndị ọchịchị na-enyocha ma na-achịkwa ihe omume ha. Dị ka iwu gbasara ịgba chaa chaa n'Ịntanet n'Ịtali, maka ọrụ nke ọrụ ha na mba ahụ, a chọrọ ndị ọrụ niile iji nweta ikikere pụrụ iche. N'ihi iwu a, ụlọ ọrụ Ịgba chaa chaa Ịtali na-etolite, na-eto ma na-abawanye uru ma na-adọrọ mmasị ndị na-etinye ego na ndị mba ọzọ.
Ịgba chaa chaa na saịtị na-anabata ndị si Italy
Hụ ndepụta nke saịtị ntanetị n'ịntanetị nke na-anabata ndị na-egwu si Italy, na-enyekwa nnukwu egwuregwu na egwu. N'ebe a, ị ga-ahụ ọtụtụ ntụrụndụ dị iche iche site na ntinye oghere na egwuregwu ndị na-ere chaa chaa na-ere site na ndị na-ere ihe dị otú a dị egwu NetEnt, Merkur, IGT, Novoline, Microgaming, Betsoft, Egwuregwu Egwuregwu, na ọtụtụ ndị ọzọ.
I nwekwara ike gụọ nyocha anyị banyere saịtị ntanetị n'ịntanetị, iji mara ọkwá kacha mma n'ịntanetị, ụgwọ ego na nhọrọ nkwụnye ụgwọ dịnụ maka ndị Ịtali.
Ịgba chaa chaa na Ịtali
Njem CasinoToplists na-aga n'ihu ma n'oge a, anyị ga-akwụsị n'ụlọ nke okwu ahụ bụ "cha cha cha" - na anwụ Italy. Kemgbe ụwa, a na-akpọ ịgba chaa chaa "casino", ọ bụ ezie na ndị Ịtali - ọ bụ naanị "ụlọ".
Ịtali - ọdịdị ala na akụkọ ihe mere eme na nkenke;
Àgwà akụkọ banyere ịgba chaa chaa na akụkọ ihe mere eme site na 1919 ruo ugbu a;
E nwere casinos 5 na ala obodo ahụ;
ebe ọ bụ na a na-ekwe ka 2010 gwụrụ n'egwuregwu chantanetị.
Ise nlekere ise nke obodo Rom Italy na adreesị;
Ozi na-akpali mmasị banyere mba ahụ na ndị bi na ya.
Obodo Italy na akụkọ ihe mere eme nkenke
Ịtali Republic - bụ ebe enyi na enyi nke Old World, ihe ọmụmụ nke mmepeanya na ihe ngosi nka na-emeghe.
Aha amara ya nke mba a natara n'aka ndi agbata obi Cypriot, ma uru ya bara oke prosa - obodo umu ehi.
Nke a bụ eziokwu na ruo ogologo oge, ọ bụ ehi ahụ bụ ihe nnọchianya nke ndị mmadụ, mgbe mgbe a na-akọwa ịkụnye anụ ọhịa wolf Rom.
Isi obodo Italia - Rome mara mma, obi na-echefu Alaeze Ukwu Rom, obodo ebighi ebi, bụ onye lụrụ ọtụtụ ndị agha. Taa, ọ bụ ebe obibi karịa mmadụ 4, ọtụtụ ndị ọbịa. Rome abiawo n'ezie, ndi mmadu nwere obi uto ma na-enye ha otutu obi uto. Ma ọnụ ọgụgụ ha anaghị agụnye egwuregwu ịgba chaa chaa na-egwu egwu, aghaghị ịbanye na mpaghara azụmahịa. E nwere ndị ọbịa ruleti , Punto Banco , Blackjack na egwuregwu iri atọ ma ọ bụ iri anọ, craps , Chemin de Fer, na onye ọ bụla mmasị, poker.
Ọ ga-abụ ihe arụ ka ị gaa Ịtali maka ebe a na-ere cha cha, n'ihi na enwere ike ịbụ otu n'ime ebe kachasị mma n'ụwa: ụlọ, ebe ewusiri ike, afara, ụlọ eze, ụlọ oriri na ọṅụṅụ, ubi vaịn, ụlọ ihe nkiri, ihe ngosi nka na ọtụtụ ndị ọzọ dị ịtụnanya.
Cha cha na ịgba chaa chaa na Itali
Ọ bụ ezie na ndị Ịtali na-emebiga ihe ókè, dịka n 'ọkwa dị ala agaghị emeghe Ụlọ ịgba chaa chaa, ihe eji eme ihe nkiri, ebe ndị mmadụ na-ahụ maka onwe ha na ọbụna ụlọ nzukọ nke oghere. Ka o sina dị, ọtụtụ casinos dị n'Ịtali.
Ịgba chaa chaa na ndị Ịtali na-eguzo ruo ọtụtụ narị afọ, ndị mmadụ na-ekpo ọkụ ma na-enwe mmasị igwu egwu, mana Katọlik nwere àgwà na-adịghị mma maka oge a. Ndị ọchịchị mere nkwenye ma kwadoro mmehie ka o wee malite ịgọchite ọdịmma mba.
Gọọmenti maara nke ọma na ọ bụrụ na ịgba chaa chaa kpamkpam, ọ ga-enweta ego na ụlọ ịgba chaa chaa nke mba ndị gbara ya gburugburu, nke na-adịghị mma. Ya mere, iji belata okpomọkụ nke ndị egwuregwu ma n'otu oge ahụ iji megharịa mmefu ego, n'ókè dị na Slovenia, France, Switzerland na Monte Carlo na-arụ ọrụ ọtụtụ casinos.
Ọnụ na Italy na-arụ ọrụ casinos 5, ma ọ dịghị nke ọ bụla n'ime Rom. Ebube cha cha na San Remo ndị na-achọ ịkụ egwú na Monaco ma ọ bụ France, azino na Campione n'ọdụ ụgbọ mmiri Lugano dị na ókèala ya na Switzerland, na cha cha na San Vincent na-emechi ụzọ ụzọ mgbapụ gaa n'olulu Mont Blanc. A Ebe 2 dị na Venice agaghị ekwe ka ndị mmadụ gaa ịgba chaa chaa na Slovenia.
N'enyeghị ya aka, naanị na narị afọ nke iri abụọ, Ịtali bụ onye ezi omume, tupu ịgba chaa chaa na-aga n'efu. Ruo ogologo oge, ụlọ ọrụ Venetian a ma ama bụ "Ridotto".
Mgbe Agha Ụwa Mbụ gasịrị, gọọmenti mechibidoro 59 casinos malitere ịrụ ọrụ siri ike na ịgba chaa chaa kemgbe 1919. Ma Mussolini ghọtara na nsogbu nke iwu dị otú a dị njọ, ya mere, na 1927, na-emeghe cha cha chaa na San Remo.
Casino San Remo dị na nnukwu ụlọ, nke e mere na 1905 site n'aka Eugene Ferret. Ọ dị na ikike obodo. Ruo ogologo oge, ọ bụ nanị ụlọ ịgba chaa chaa na Ịtali, ma n'ebe ahụ ka ọ bụ, dịka Mussolini si dị ka nkwenye nke ọchịchị ahụ.
Ka o sina dị, ọrụ Ịtali emewo ka eziokwu ahụ dị na 1933 mepụtara Casino Campione d'italia. E wuru ya na 1917 nke nwere ihe pụrụ iche, oge nke oge ya. Nke a bụ nnukwu ụlọ n'ọdịdị taa bụ nnukwu ụlọ ịgba chaa chaa na Europe.
Na 1937, iwu kwụsịrị ntakịrị, na Venice ka a na-agba chaa chaa chaa chaa ma mana nọ n'okpuru akara nke obodo.
Mgbe Agha Ụwa nke Abụọ jikọtara ịgba chaa chaa echekwara, ka na-arụ ọtụtụ casinos, mana mgbalị niile iji gbasawanye ahịa siri ike.
Na-adọrọ mmasị na ọ bụ akụkọ banyere nchọpụta nke chaa chaa 4th na San Vincent, dị elu na Alps. Ọ dị na mpaghara Valle d'Aosta, ebe e nwere njikọ chiri anya nke France na Ịtali, na France na 1947 site na referendum choro itinye onwe ha n'ókèala. Ndị bi na San Vincent tinyere ọnọdụ Rom ka ha nọgide na Italy mgbe ụlọ cha cha ga-apụta. O meghekwara ngwa ngwa.
Ma akụkọ ihe mere eme nke ebe a na-eme Italian, ọbụna n'okpuru ọchịchị obodo, maara oge dị egwu. Ndi oru na ndi oru nlekota oru kwadoro nke oma. Na 1983, ọbụnakwa jidere ụlọ ọrụ Saint Vincent na njikọ Sanremo na mafia. Mgbe azụmahịa a siri ike mezigharị ma gbanwee ntụziaka.
Taa, n'ọdụ ụgbọ mmiri Apennine ọ na-arụ ọrụ casinos 5, ma ha ka bụ ndị ọchịchị, mpaghara ndị ahụ na-enye aka na mmefu ego nke nchịkọta 70% nke uru site na ígwè ntinye, 50% - site na egwuregwu US, 45% - si French.
Ọ bụ ezie na ọchịchị Ịtali agaghị agafe na casino, na 2010 ndị Ịtali nwere ike igwu egwu n'ime ụlọ ịntanetị. Ụdị enyemaka ahụ ziri ezi site n'aka ọtụtụ narị ijeri ụtụ isi e natara na mmefu ego.
Ihe dị ịrịba ama, ọ bụ ezie na obere cha cha na Ịtali, na isi obodo ha anọghị ebe a, ebe ndị a aghọwo ihe ama ama na onye njem nleta mma. Obodo ndi okomoko ndi mara mma nke oma bu uzo maka nmekorita ndi mmadu, ihe ndi ozo na ndi mmadu onwe ha.
Ebe nkiri Rom
Oghere. Adreesị: Piazza del Colosseo, 1. Ọ bụ ihe nnọchianya nke Ancient Rome, bụ ụlọ ochie kachasị mma, nke bụ ihe ngosi nke isi obodo Italian.
Isi iyi Trevi. Adreesị: Piazza di Trevi. Akwa mmiri Baroque nke narị afọ nke XVIII, nke Nicola Salvi mere, ụlọ elu n'elu mpaghara Trevi nke fọrọ nke nta ka ọ bụrụ mita 26, na-emetụta mma na ịdị ebube.
Pantheon. Adreesị: Piazza della Rotonda. Ihe nlereanya kachasị mma nke ime ụlọ Rom, ọpụpụ dị mma na ime mma.
Mpaghara Rom. Adreesị: Via della Salaria Vecchia, 5 / 6. Ebe obibi nke ndụ oge ochie nke Rome na-enye nghọta zuru oke na ndụ nke otu narị afọ gara aga.
Katidral Saint Paul. Adreesị: Piazza San Pietro. Nke a bụ ụka kachasị nke ndị Kraịst na ụwa na ihe kachasị mma nke Vatican.
Ezigbo mmasị gbasara Ịtali na Ịtali
Italy - obodo kachasị mma na Europe.
98% nke ndị bi - Katọlik.
Italy - ebe omumu nke ọkara nke ụwa a ma ama cheese.
N'Itali, e nwere okwu abụọ dị iche iche: Vatican na San Morino.
N'Ịtali, karịa ugwu mgbawa karịa mba ọ bụla ọzọ na Europe.
Italian nke oge a - asụsụ nke Florentine, bụ nke e ji mara Dante.
Italy na map nke Europe
0.1 Ndepụta nke saịtị 10 Italian Online Casino
2.1 Ịgba chaa chaa n'Ịntanet n'Ịtali
2.2 Ịgba chaa chaa na saịtị na-anabata ndị si Italy
3 Ịgba chaa chaa na Ịtali
3.0.1 Obodo Italy na akụkọ ihe mere eme nkenke
3.1 Cha cha na ịgba chaa chaa na Itali
3.1.1 Ebe nkiri Rom
3.1.2 Ezigbo mmasị gbasara Ịtali na Ịtali
3.1.3 Italy na map nke Europe